Fanaraha-maso ny asan’ny Governemanta:NIHARIHARY NY ASA VITA -
AccueilRaharaham-pirenenaFanaraha-maso ny asan’ny Governemanta:NIHARIHARY NY ASA VITA
07/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Araka ny voalazan’ny andininy faha-102 andalana faharoa amin’ny Lalàm-panorenana dia misy ny fanaraha-maso ataon’ny Loholon’i Madagasikara ny Governemanta ka atao indray mandeha isaka ny tapa-bolana ny fametraham-panontaniana farafahakeliny. Tamin’ny fivoahana ara-potoana voalohany moa dia tsy nisy ny fihaonana tamin’ny Governemanta satria nilaza ny filohan’ny antenimieran-doholona Rakotomanana Honoré fa vao haingana loatra no nandray ny asany ny Governemanta ka mbola tsy hita izay hitsarana sy hanaraha-maso an’ireo mpikambana ao anatiny. Omaly no raikitra izany fihaonana izany ka nahatratra 177 ny fanontaniana napetraky ny senatera tamin’ny mpikambana teo anivon’ ny Governemanta notarihin’ny Praiminisitra, Mahafaly Solonandrasana. Tsy nisy tsy voavalin’ny governemanta anefa ireo fanontaniana napetraka ary tsy nisy notampenam-bava ihany koa ireo senatera fa na dia tsy lasa tany amin’ny governemanta aza ny fanontaniany dia navela hiteny izy izay fahitany ny fandehan’ny raharaham-pirenena. Ny loholona rahateo moa dia mpanolontsaina ara-toekarena sy sosialin’ny governemanta, ary miahy ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana araka ny voalazan’ny lalàna.
Fisaorana no betsaka
Samy nitondra ny tenin’ireo Kaomina izay soloany tena moa ireo senatera ireo. Ny Fanontaniana moa dia efa nomen’ny senatera ny ministra tsirairay manandrify ny fanontaniana mialoha ity fotoana omaly ity. Ny valim-panontaniana ihany sisa no nandrasana. Betsaka ny fanontaniana nipetraka tamin’ireo minisitra tsirairay saingy tamin’ny an’ny Minisitry ny Fitantanam-bola sy ny Tetibola no betsaka indrindra ny fanontaniana satria 11 izany. Na izany aza anefa dia tsy nisy fanakianana firy nataon’ireo senatera. Saika fisaorana ny fitondrana ho nahavita zavatra aza no betsaka. Tahaka ny fahavitan’ny foto-drafitrasa, tao ny lalana, tao ny sekoly, sns… ary nisy maromaro tamin’ireo senatera no nanolotra hevitra ho an’ny governemanta mba hamahana ny olana any amin’ny faritra misy azy . Saika manodidina ny sehatra fampandrosoana avokoa moa ny fanontaniana nipetraka. Tao ny resaka fitsinjaram-pahefana, ny fanampiana tokony omen’ny fanjakana ho fampandrosoana ny kaomina, ny tambin-karaman’ireo Ben’ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy rehetra dia tokony ampiakarina, ny resaka ristourne na tamberim-bidy alain’ny Faritra, ny ady amin’ny fandriam-pahalemana, sns…Ny Praiminisitra moa dia nanazava fa « manana fahavononana hampandroso ny fanjakana ary matoa nahavita nandresy lahatra an’ireo mpamatsy vola sy mpampiasa vola vahiny. Tsy mora izany kanefa tsy hitarainana fa tena fitiavan-tanindrazana ». Nanome toky moa ny Praiminisitra sy ny ekipany fa mbola mitohy ny ady izay efa fenitra napetrany hatrany am-boalohany.